Ibhaso lekhontrakthi elinempikiswano malunga neengubo zeCorona eMantla Rhine-Westphalia zibonisa ukuba yayinkulu kangakanani inkxalabo kurhulumente welizwe entwasahlobo malunga nokuphuma kwempahla ekhuselayo. Ukwakhiwa kwakhona komphathiswa onoxanduva lwezempilo kutyhila iinkcukacha ezithandabuzekayo.
UKarl-Josef Laumann (CDU) wayefuna ukuwucoca lo mbandela udinisayo-ngakumbi ukukrokrelwa kobandlululo olwalukhuliswa liqela eliphikisayo iiveki. Umphathiswa wezempilo eMntla Rhine-Westphalia uthethe kakhulu njengesiqhelo, wafefa amazwi ahlekisayo. Kodwa ngaphezulu kwayo yonke i-SPD khange inikezele.
Ixesha lemibuzo kwiveki ephelileyo ePalamente lithathe phantse iiyure ezimbini. “Senze izinto ngokokwazi kwethu kunye nenkolelo yethu. Ndingakwazi ukulawula naluphi na uhlobo lwenkohlakalo kunye nezinto ezinjalo. Ndiqinisekile ngaloo nto, ”utshilo uLaumann.
Imalunga nesivumelwano seedola esiphikisayo phakathi kukarhulumente welizwe kunye nenkampani eyolukiweyo eyenziwe yenziwa ngunyana we-Nkulumbuso u-Armin Laschet (CDU) wabo bonke abantu. Njengebhlog yefashoni, uJoe Laschet ukwabonisa iimpahla ezivela kwinkampani iMönchengladbach van Laack kwi-Intanethi kwaye wayethumele inombolo yefowuni evela kumphathi uChristian von Daniels kuyise. Ngapha koko, u-Armin Laschet uxele kumrhwebi ngorhatya lwangeCawa, yayingu-Matshi 29, kwaye bathetha ngemaski zokuzikhusela, kuba zazifuneka ngokungxamisekileyo ekuqaleni kwesifo se-corona.
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, abasebenzi baseburhulumenteni bafika bezokujonga izinto, kwaye ekupheleni kuka-Epreli kwasayinwa i-oda ngesixa esimalunga ne-45 yezigidi zeerandi, kodwa hayi iimaski, kodwa iigawuni zokhuselo zonyango ezizigidi ezilishumi. Kwakungekho sibhengezo. Ngamaxesha aqhelekileyo oku kuya kuba sisikhalazo ngqo. Nangona kunjalo, intwasahlobo ka-2020 yayiyimeko ekhethekileyo apho iinkqubo eziqhelekileyo zazingasebenzi. Kwakukho nommiselo ovela kurhulumente ovumela ukuba iikhontrakthi zinikezelwe ngaphandle kwethenda kubhubhane.
Iqela eliphikisayo lisayibona ingxaki kwishishini, kuba ngokokujonga kwabo u-van Laack wayekhethwa kunokunqaba kwezinye iinkampani zelaphu. Inkokheli yeqela le-SPD epalamente uThomas Kutschaty ithathela ingqalelo inkqubo e-van Laack "njengokophula imigaqo-nkqubo yolawulo olululo". "Akukho semthethweni" kuba nakwesona sidingo sikhulu, ubuncinci izithembiso ezintathu ezikhuphisanayo kuya kufuneka zifunyenwe, utshilo kwipalamente kaRhulumente kwiveki ephelileyo.
Akukho nkampani inokufumana ubunzima ngenxa yokuba ibambelela kwimithetho nemigaqo, kwaye akukho nkampani kufuneka ibe nokhuphiswano "kuba inofikelelo olukhethekileyo kwintloko karhulumente". Isivumelwano sasinokwenzeka ku-van Laack "eyayingenakwenzeka kwezinye iinkampani". Ezi zityholo ngoku zinobunzima kuLaschet, ofuna ukuziqinisa kwidabi lokuba ngusihlalo we-CDU kunye nokugqatswa kwengqonyela.
Impikiswano ejikeleze ishishini likaVan Laack ngumzekelo wento eyenzekayo xa izikhokelo ezifanelekileyo zokuphepha ukuthatha ithuba kwimeko engxamisekileyo zingasasebenzi kwaye akukho mntu kufuneka enze umzamo wokuvavanya ngononophelo iiodolo. Imvakalelo phakathi kwabantu ababandakanyekayo kukuba inkqubo efana naleyo kaVan Laack inokuba nayo incasa ibonakala ngathi iphelisiwe.
UMphathiswa wezeMpilo uLaumann, ondlu yakhe yayihoye ishishini noVan Laack, akafuni kubona nantoni na egwenxa okanye engalunganga kwishishini. Ngexesha leMibuzo, umKrestu onedemokhrasi ukhumbule imeko ekuqaleni kobhubhane. Ngelo xesha kwakukho "ukunqongophala okumangalisayo kwezixhobo zokukhusela": "Ngelo xesha kwakukhona isidingo sabantu."
Inkonzo ifumene amakhulu ezinto mihla le, malunga ne-7000 iyonke, kwaye uninzi lwazo lwaluthandabuza. Iqela labantu abangama-30 endlwini yakhe bayikhathalela, bengenamava kwimiba yokuthengwa kwempahla, phantsi koxinzelelo lwexesha eligqithisileyo. “Senze konke okusemandleni. Kuba andifuni kuphendula ngezinto zethu zokukhusela eziphelayo. Ndicinga ukuba niyayiqonda yonke loo nto, ”utshilo uLaumann. Uye wayicacisa into yokuba uVan Laack wayengomnye woonokontraka abaninzi.
Urhulumente wezwe uvale ii-odolo zokukhusela iimpahla kunye neenkampani ezingama-40 phakathi kukaFebruwari nasekuqaleni kukaMeyi, phantse isiqingatha seebhiliyoni zeerandi. U-Laumann uchaza ukukhululeka okukhulu xa uLaschet emtsalela umnxeba emva komnxeba nosomashishini: "Ndibe nemvakalelo elungileyo xa ndisiya kulala ukuba ekugqibeleni bekukho isiphelo ekupakisheni ukufumana iimpahla zokuzikhusela."
Nangona kunjalo, iya isiya icaca into yokuba uVan Laack wanikwa inkxaso ekhethekileyo kwimfono-mfono yeNkulumbuso eyalela ukuba ezinye iinkampani zingabinalo ithuba lokuyifumana. Ngokwazi kwethu, iLaschet khange ifowunele nawuphi na omnye usomashishini. "Akukho lwazi malunga neengxoxo iNkulumbuso engazibambi esidlangalaleni," utshilo uLaumann.
Kuqala yayimalunga neemaski, njengoko oosomashishini kunye nenkulumbuso bebonisile. “Ngelo xesha, inkampani yakwa van Laack yayingakwazi ukuvelisa iimaski ezinomgangatho wemaski ye-FFP2. Sathetha nenkampani kwaye iziphumo yayikukukhula kweengubo zokhuselo. Ihambe njalo, ”utshilo uLaumann kwi Question Time. Kodwa uVan Laack akakhange abonise naziphi na iingubo zokukhusela uviwo, kuphela ilaphu. NgokukaLaumann, le nto ingabonwanga yafunyanwa liZiko lezoKhuseleko eMsebenzini ukuba ibe ngumgangatho owaneleyo, ubuncinci ngexesha lobhubhane.
Umbuzo ushiyekile wokuba ingaba enye inkampani ibinokubonelela ngezi gown zikhuselayo kula magama ngotshintshiselwano olufanayo nobuphathiswa. Inzima loo nto ukuyakha ngokutsha xa ujonga emva, kodwa kuyacaca ukuba akukho ngcinga inikiweyo entwasahlobo. Endaweni yoko, uLaumann wayenza yacaca into yokuba unxibelelwano noVan Laack lwanele.
"Mhlawumbi incinci ingqondo anayo umntu olungileyo wase Westphalian: Ukuba ndikwincoko entle nomntu, andiqhubi kabini - andazi ukuba ibiyintoni na isizathu." U-Laumann uthetha apha into yokuba akekho omnye umenzi wayeceliwe. Ngayiphi na imeko, kwakungekho njongo emva kwayo. Ngexesha leMibuzo, amalungu e-SPD abuze ukuba kutheni urhulumente wezwe enganxibelelananga nenkampani iSeidensticker eBielefeld.
Seidensticker wenze isithembiso
U-Laumann wayenomsindo: "Ewe ngewukhe waya nalapho. Ngokuchasene noko, kufuneka nditsho ukuba inkampani eyaziwayo eMantla iRhine-Westphalia kufanele ukuba nayo iyazi ukuba ngubani uMphathiswa Wezempilo apha. Ngewukhe wathetha nam.
Seidensticker eneneni wenze isithembiso seemas zemihla ngemihla, kodwa ubulungiseleli bukaLaumann abunakusebenzisa. Kuyabonakala ukuba kwakungekho kuphinda kutshintshiswane. “Akukho nkulumbuso, akukho sebe lezempilo kwaye akukho gosa liphezulu libizwa ngokuba nguSeidensticker. Akukho mntu ubiza apho, kweyona mveliso inkulu yamalaphu kwilizwe lethu, ”igxeke inkokeli yeqela lePalamente leSPD uKutschaty.
UVan Laack ngoku ufumene ii-odolo ezimbini ezongezelelweyo zemaski zokukhusela amapolisa, kwakhona ngaphandle kwethenda, kwakhona oku kulungisiwe ngophuhliso olungalindelekanga kubhubhane. Igumbi lokuthenga laseRhineland ngoku livavanya isikhalazo senkampani ngokuchasene nesinye sezivumelwano. Ukusuka kuLaumann isicatshulwa sidlulisiwe, othe emva kobhubhane “akanayo i-ofisi yophicotho-zincwadi lukarhulumente 'waqhekeka', wenze konke okungalunganga”.
Kwinkampani ngokwayo, ukukhula kuyimpumelelo enkulu. U-Laumann uthe kwi-Question Time wayechulumancile ukuba u-van Laack uphinde wavelisa ingubo yokhuselo kwaye "ngokuqinisekileyo uye waba ngumthengisi wempahla ekhuselayo kwintengiso yesiqhelo yeeklinikhi ezaziwayo kwiphondo lase North Rhine-Westphalia".